“Messi ma heli doono meel ka fiican Barcelona” – Gool FM
“Messi ma heli doono meel ka fiican Barcelona”
(Spain) 30 Abriil 2021. Magaca Lionel Messi ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Barcelona xagaagii hore, kaddib markii uu ka codsaday maamulka kooxda xilligaas inay u ogolaadaan inuu ka tago Barca.
Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa rajeynaya in Lionel Messi uu la sii joogi doono Barcelona, ​​isagoo carabka ku adkeeyay inuusan heli doonin meel ka fiican Blaugrana.
Xiddiga reer Argentina ayaa qandaraaska uu kula joogo Barcelona wuxuu dhacayaa xagaagan, ilaa iyo haatanna ma uusan cusbooneysiinin qandaraaskiisa, iyadoo xiiso weyn uu ka helayo kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain si ay u helaan adeegiisa.
Laakiin wararka ka imaanaya gudaha Spain ayaa waxay xaqiijinayaan in Lionel Messi uu ku dhow yahay inuu cusbooneysiiyo qandaraaskiisa, isla markaana ay u badan tahay inuu la sii joogi doono kooxda reer Catalonia ilaa uu ka fariisanayo kubadda cagta.
Haddaba shabakada caalamiga ah ee “Goal” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan rajeynayaa inuu xirfadiisa ku dhamaysan doono Barcelona.”
“Lionel Messi ma heli doono guri ka fiican kan Barcelona.” Ayuu yiri Pep Guardiola.